I-Ryanair yandisa iinqwelomoya zayo ezirhoxisiweyo kude kube ngoMatshi 2018 | Iindaba Zokuhamba
UCarmen Guillen | | ngokubanzi, Izaziso
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sithethe kabuhlungu ukuba Inqwelo moya yeRyanair urhoxise inani elikhulu leenqwelomoya ezihleliweyo de kwango-Okthobha u-28. Ewe, namhlanje siyazi ukuba iRyanair yandisa iinqwelomoya zayo ezirhoxisiweyo hayi ngaphantsi kude kube ngoMatshi 2018. Ithetha ntoni le nto? Baza kuba yintoni abanye Abakhweli abangama-400.000 bachaphazeleke kakhulu ukusukela ngo-Novemba, ukongeza kwimali esele irhoxisiwe ngo-Septemba nango-Okthobha.
Oku kwenziwa kwaziswa ngoshicilelo olubanzi onokulufunda apha Ikwayiloo nto bashwankathela ngayo isizathu sokurhoxiswa kunye nezikhululo zeenqwelomoya eziza kuchaphazeleka kakhulu koku kurhoxiswa.
Namhlanje, iRyanair ineenqwelomoya ezingama-400, zazo 25 iyakuyeka ukusebenza kude kube ngumhla obekiweyo. Oku kuthatha ukuba ngexesha lasebusika elizayo, iya kurhoxisa i 34 yeendlela, ezimbini zazo zineenqwelo moya zaseSpain ezibandakanyekayo. Oku akusachaphazeli abakhweli kuphela abathenga la matikiti enqwelomoya kodwa kunye nenkampani enexabiso eliphantsi eIreland, njengoko yehlise kakhulu uqikelelo lokukhula.
Ngexesha lasehlotyeni lika-2018, iRyanair icwangcisa ukuba neenqwelomoya ezineenqwelomoya ezingama-445 zizonke kwaye sele zilumkisile ukuba kwezo, ezili-10 zazo ziya kuhlala zingasebenzi ngenxa yengxaki efanayo nebaxhalabisayo namhlanje: ubumdaka ngeeholide zabaqhubi beenqwelo moya.
Kodwa masifike kweyona nto ibaluleke kakhulu: Zeziphi iinqwelomoya okanye iindlela zaseSpain ukuza kuthi ga ngoku ezichaphazelweyo kwezi kurhoxisiweyo? Ngokwenqwelo moya ngokwazo, kunjalo IGlasgow-Las Palmas kunye noSofia-Castellón. I-Ryanair ikwaqinisekisile ukuba abo bakhweli sele bazisiwe nge-imeyile "ukubanika ezinye iinqwelomoya okanye ukubuyiselwa imali" kwamatikiti abo. Kwaye bonke bahlawulelwe amatikiti e-euro ezingama-40 (ezingama-80 kwimeko yeenqwelo moya ezijikelezayo) ukuze babhabhe kunye nenkampani phakathi kuka-Okthobha-Matshi. Abakhweli abakhetha olu khetho lokugqibela kufuneka babhukishe itikiti ngo-Okthobha.
1 Iindlela ezindizayo ezirhoxisiweyo
2 Imibuzo iphendulwe nguRyanair
Iindlela ezindizayo ezirhoxisiweyo
Zombini zabafundi baseSpain abasilandelayo kunye nabo basilandelayo abavela ngaphandle kwemida yethu, nazi zonke iindlela ezirhoxisiweyo ukusuka ngoNovemba ukuya kuMatshi 2018:
USofia - uCastellón
USofia - uPisa
IChania - iThessaloniki
Sofia - iStockholm (NYO)
ICologne - iBerlin (SXF)
I-Thessaloniki - iWarsaw (iWMI)
IHamburg - Oslo (TRF)
Trapani - eFrankfurt (HHN)
IHamburg - iThessaloniki
IHamburg - iVenice (TSF)
ILondon (LGW) -Belfast
Trapani - iParma
ILondon (STN) -Edinburgh
Trapani - iRoma FIU
ILondon (STN) -Glasgow
Imibuzo iphendulwe nguRyanair
Emva koko, sikushiya neminye imibuzo eqhelekileyo ebuzwe kwiRyanair kwiiveki ezidlulileyo ngokurhoxiswa:
Ngaba le ngxaki yokulungelelaniswa kwe-A / L iyaziphinda ngo-2018?
Hayi ngenxa yokuba i-A / L iya kunikwa ixesha elipheleleyo leenyanga ezili-12 ngo-2018.
Ngaba bonke abathengi abachaphazelekayo bazisiwe ngolu tshintsho kwixesha lasebusika?
Ewe, bonke abathengi abachaphazelekayo bafumene izaziso ze-imeyile namhlanje.
Ngaba aba batshintsha ixesha banelungelo lokufumana imbuyekezo ye-EU261?
Hayi, kuba olu tshintsho lwenziwe kwiveki ezintlanu ukuya kwiinyanga ezi-5 kwangaphambili, imbuyekezo ye-EU5 ayiveli.
Ngaba amaxabiso aya kunyuka ngenxa yoku kukhula kancinci?
I-Ryanair iya kuqhubeka nokunciphisa amaxabiso. Uthotho lokuthengisa izihlalo luya kuqengqeleka kwiinyanga ezizayo ukuqala ngesigidi esi-1 sokuthengisa isihlalo kule mpelaveki kumanqanaba ee- € 9,99 ngendlela enye.
Ngaba kuya kubakho ukurhoxiswa okungakumbi?
Ukukhula kancinci oku kuthetha ukuba siza kuba neenqwelomoya kunye nabaqhubi beenqwelomoya abashiye ubusika kunye nehlobo lowe-2018. ukuphambuka.
Ndingazi njani ukuba inqwelo moya yam ichaphazelekile?
Uyakufumana i-imeyile yokutshintsha inqwelomoya ukusuka eRyanair nokuba kungoMvulo, nge-18 kaSeptemba, okanye namhlanje, ngoLwesithathu, nge-27 kaSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » I-Ryanair yandisa iinqwelomoya zayo ezirhoxisiweyo kude kube ngoMatshi 2018
Uhamba njani iveki yonke kunye nengxowa enye yokuphatha